GOSSIP GIRL မှာဖြစ်ခဲ့တာတွေထဲကတစ်ခုတည်းသောအဖြစ်အပျက်ကဘာလဲ။ - သတင်း
Gossip Girl မှာဖြစ်ခဲ့တာတွေထဲကအဖြစ်အပျက်ကဘာလဲ။
လွန်ခဲ့သော ၁၀ နှစ်ကထုတ်လွှင့်ခဲ့သော Gossip Girl ကိုသင်သိပါသလား။ ထို့အပြင် Beatles ဖွဲ့စည်းမှုအပြီးတွင်ယဉ်ကျေးမှုများပေါ်ပေါက်လာခြင်းသည်အကြီးမားဆုံးသောအမှားအယွင်းများကြုံရသော်လည်း၎င်းကိုသင်သိပါသလော။
ဟုတ်ပါတယ်, GG သည်ထူးခြားသောအရာဖြစ်သည် - သို့သော်၎င်းသည်၎င်း၏ကြံစည်မှုအချို့သည်လုံးဝမကိုက်ညီ။ လုံးဝမိုက်မဲခြင်းမဟုတ်ပါ။ ဤတွင်သင်၏ကြည့်ရှုပျော်မွေ့မှုအတွက်ထိုကြံစည်မှုအချက်များဖြစ်သည်။
တဖန်ငါဒီပြုစုဖို့ငါ့ကိုယူ။ အဘယ်မျှကာလပတ်လုံးအဘို့? ဒါကငါပြောပြဘယ်တော့မှအခြားလျှို့ဝှက်ချက်ပါပဲ။
အဆိုပါ Humphrey '' တိုက်ခန်း
Humphrey ဟာရုန်းကန်နေရတဲ့မိသားစုတစ်ခုပါ။ သူတို့၏တစ် ဦး တည်းသောဖခင်သည် ၁၉၉၀ ပြည့်လွန်နှစ်များကကျော်ကြားသောတီးဝိုင်းတွင်ရှိခဲ့ပြီးယခုပန်းချီပြပွဲကိုလီလီဗန်ဒါဝုဒ်ဆင်အားသာရောင်းခဲ့သောပန်းချီပြခန်းကိုဖွင့်လှစ်ထားသည်။
ငါ၏အဖောက်သည် r ခဲ့ဘယ်မှာ ??
သို့သျောလညျးသူတစ်နည်းနည်းဖြင့်သူ၏သားသမီးနှစ် ဦး စလုံးကိုပုဂ္ဂလိကကျောင်းများမှတဆင့်စီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့် dope လျှောနံရံများဖြင့်ဘရွတ်ကလင်းဟိုက်၏ခေါင်မိုးပြောင်းလဲခြင်းကိုတတ်နိုင်သေးသည်။
စောင့်ဆိုင်း, Rufus Humphrey မူးယစ်ဆေးဝါးကုန်သည်ခဲ့သလဲ
သေချာတာပေါ့၊ သရော်မှုတွေဟာအမြဲတမ်းဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိပေမယ့်နယူးယောက်ဘဏ္Financialာရေးရာဇ ၀ တ်မှုဗျူရိုကသံသယရှိသူကိုသူ့ရဲ့အရွယ်ရောက်ပြီးသားသားကိုကိုကင်းအနည်းငယ်ထုပ်နေချိန်မှာသူမမျက်နှာကိုပုတ်ခတ်ဖို့စောင့်နေတာထက်သူတို့ရဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေကိုစတင်ဖို့ပိုကောင်းတဲ့နည်းလမ်းတွေရှိရမယ်။
ကိုယ့်ပဟေဠိကို တင်. ရမရနိုငျအဘယ်ကြောင့်
The အစစ်အမှန် ရာဇဝတ်မှုကြောင်း shawl ကော်လာ Jumper, amirite
အဘယ်ကြောင့်တစ် ဦး ရမ်းသို့မဟုတ်တစ်ခုခုရမဟုတ်လော
Constance Billard နှင့်စိန့်ဂျူးဒက်စ်များသည်အရှေ့ဘက်ကမ်းရိုးတန်းရှိအထင်ပေါ်ဆုံးနှင့်အထင်ကြီးစရာကောင်းသောပုဂ္ဂလိကကျောင်းနှစ်ခုဖြစ်မည်ဟုယူဆရသည်။ ထို့ကြောင့်ဆရာများသည်သူတို့အားလုံးသည် Avril Lavigne ဗီဒီယိုတွင် ၀ တ်နေသည့်လူတိုင်းနှင့်အတူအဆင်ပြေစွာဝတ်ဆင်ထားကြသည်။
ဒါမှမဟုတ် Britney Spears ဗွီဒီယိုတစ်ခု။
ဒါမှမဟုတ်ဘာပဲဒီ fuck ဆိုတဲ့။
အဆိုပါ Baskervilles ၏ Hound?
ဒန် Humphrey ရဲ့အရေးအသားအသက်မွေးဝမ်းကျောင်း
ဟုတ်ပါတယ်၊ Charlie Trout ဆိုတဲ့နာမည်ကိုတီထွင်ခဲ့တဲ့သူကသူ့သူငယ်ချင်းတွေအားလုံးသူ့အပေါ်ဘယ်လိုဆိုးကျိုးသက်ရောက်တယ်ဆိုတာကိုစာအုပ်တစ်အုပ်ရေးပြီး New York Times အရောင်းရဆုံးစာအုပ်ဖြစ်လာတယ်။
ငယ်ရွယ်မိန်းကလေးများ porn fucking လူဟောင်း
ကိုယ့် fuck ဆိုတဲ့အရှုံးမပေးပါလိမ့်မယ်ပါဘဲ။
ယေဘုယျအားဖြင့် Nate ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း
သငျသညျ Nate Archibald တူမဟုတ်လျှင်, သင်တန်း, အရာကိစ္စတွင်သင်ရုံသင်တို့၏ azure မျက်လုံးများနှင့်ပေါ့ပေါ့ဆဆဆွယ်မြည်တမ်းမြိတ်အမျိုးသမီးတွေရဲ့ Ovary ပေါက်စေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သင်ရုံ gormless အလုပ်သင်ဆရာဝန်ဖြစ်ခြင်းမှရာထူးတိုးခံရနိုင်ပါတယ်။
ဟားဟားငါ x ကိုရှာဖွေနေအလွန်ကောင်းသောပါပဲ
သခင်ဘုရား Marcus Beaton
ငါဗြိတိသျှ, အချိန်အားလုံး၏အနည်းဆုံးစစ်မှန်ဗြိတိန်ဝဲဖြစ်ထွန်း: ငါထာဝရဘုရားဖြစ်!
ဒါကြောင့်သခင်ဘုရား Marcus Beaton, သူ၏မိခင် fucking များအတွက် penchant နှင့်အတူအင်္ဂလိပ်မင်းမျိုးအနွယ်ဝင်ဖြစ်ခြင်းတက်အဆုံးသတ်သူကိုတိုနီဘလဲရဲ့ပျင်းစရာ Hamptons ရည်းစား၏ဇာတ်လမ်းစတင်ခဲ့သည်။ Chuck တောင်မှဒီပြmanyနာတွေအများကြီးမရှိပါဘူး။
သူဟာ Winklevoss အမွှာလိုအတိအကျကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာကောင်လေးဟာ shifty ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုငါတို့သိသင့်ပါတယ်။
Damien Dalgaard နှင့်တူသောမူးယစ်ဆေးရောင်းဝယ်သူများ
Damien Dalgaard အပြင်ဒါကပါ။
ကောလိပ်ဇာတ်လမ်းများကိုသင်ငြီးငွေ့လာသည်အထိရာသီတစ်ခုပြီးတစ်ခုလုံးလုံးဝဖယ်ရှားပစ်ရန်ဆုံးဖြတ်ပါ၊ မည်သည့်ဇာတ်ကောင်မှမပါ ၀ င်ပါက၎င်းတို့အားလုံးသည် (က) ကျောင်းထွက်သည်ဖြစ်စေ၊ ကောင်လေး နှီးနှောဖလှယ်ပွဲ၏။
Gossip Girl ကမ္ဘာ့အမြင်အခင်းအကျင်းတွင်ဥရောပသည်ရှုပ်ထွေး။ ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသောနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ မင်းနှစ်ပါးနှင့်သာတွေ့ဖူးပြီးမင်းများနှင့်သင်၏ပျော်ရွှင်မှုကိုသွားလမ်းလျှောက်သူ Dickensian အဝေးပြေးလမ်းမကြီးများကမင်းအားသင်၏အရာအားလုံးကိုမပေးလျှင်မင်းကိုဝမ်းဗိုက်တွင်ပစ်မည်။ သွေးထွက်သံယိုရတနာ။
ကံမကောင်းစွာ Chuck အတွက်သူသည်အဆုံးစွန်သော run-in ရှိခဲ့ပါတယ်။
ဒီအဖြစ်အပျက်ကိုပြောပြခဲ့တဲ့ Chuck ဟာသူကိုယ်တိုင်ကို Henry (ဒါမှမဟုတ် Henri?) လို့ခေါ်တဲ့အားကစားနည်းနည်းနဲ့အားနည်းနေတဲ့အင်္ကျီနဲ့အင်္ကျီအနည်းငယ် ၀ တ်ထားတဲ့အင်္ကျီ ၀ တ်စုံတွေနဲ့ ၀ တ်ဆင်တဲ့အဝတ်အစားအပြည့်နဲ့အသစ်တီထွင်ဖို့အခွင့်အရေးကိုအသုံးချခဲ့တယ်။
နွေ ဦး ရာသီချိုး themed ပါတီမတ်မတ်စိတ်ကူးများ
သူသည်လမ်းထောင့်ရှိတိုနီဘလဲကိုမထိမချင်း၊ ဥရောပသည်ကီလိုမီတာ ၁၀.၁၈ သန်းရှိသောisရိယာများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်သင်သည်အမေရိကန်မှသင်၏မိတ်ဆွေဟောင်းများနှင့်အမြဲတမ်းဝင်ဆံ့သောနေရာဖြစ်သည်။
ကို '80s အတွက်သတ်မှတ်ထားသောသောလိုက်တယ်ဇာတ်လမ်းတွဲ
Billy Baldwin သည်လီလီအားသူမ၌ကင်ဆာရှိကြောင်းအမှန်တကယ်ယုံကြည်ရန်လှုံ့ဆော်ပေးသည်။ အချစ်ဇာတ်လမ်းသေသွားပြီလို့ဘယ်သူပြောတာလဲ
Monaco ဇာတ်လမ်း၏ Blair-as-Grace-Kelly ၏မင်းသမီးအားလုံးသည်အလွန်ကောင်းမွန်သည်။ သို့သော် Blair သည်သံသယဖြစ်ဖွယ်ကားတစ်စီးပျက်ကျမှုကြောင့်ဆုံးရှုံးခဲ့ရသောမင်းသမီး Diana ၏သေဆုံးခြင်းကိုခံတွင်းညံ့ဖျင်းသောပါးစပ်ပါးစပ်ထဲတွင်အရသာအနည်းငယ်ဆိုးစေခဲ့သည်။
ငါတကယ်အာရုံစိုက်ခဲ့ပါဘူးသော Serena ရဲ့ဝမ်းကွဲအကြောင်းကိုကြောင်း storyline
သူမနာမည်က Juliet လို့ထင်လား ပြီးတော့သူမကစျေးကြီးတဲ့အ ၀ တ်အစားတွေကို ၀ တ်ဆင်ပြီး ၀ တ်ဆင်ပြီးပြန်ပေးလို့ရမလား။ မဟုတ်ဘူး၊ စောင့်ပါ၊ သူသည်အစ်ကိုဖြစ်သူသည်လိင်မှုကျူးလွန်သူများမှတ်ပုံတင်တွင်ပညာရှိဆန်သောကျောင်းဆရာတစ် ဦး ဖြစ်သည်။
Nope, Serena ရဲ့ဝမ်းကွဲကိုအိုင်ဗီလို့ခေါ်တယ်။ ဒါမှမဟုတ်ချာလီလား။ ရိုးသားဖို့, ငါ shit ၏လျော့နည်းမပေးနိုင်ဘူး။
Scott, Rufus နှင့်လီလီ၏လျှို့ဝှက်သားနှင့်အတင်းအဖျင်းမိန်းကလေးရဲ့အများဆုံးနှောင့်အယှက်ဇာတ်ကောင်တစ်ကွက်အချက်နှင့် Vanessa များအတွက်အလားအလာချစ်ခြင်းမေတ္တာအကျိုးစီးပွားအဖြစ် shoehorned ခဲ့သည်။ ထို့နောက်ရုတ်တရက်သူပျောက်ကွယ်သွားပြီးထပ်မံဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းဘယ်တော့မှမဖြစ်ခဲ့ပါ။
ငါ့ဆံပင်က ဦး ထုပ်နဲ့တူတယ်
Bart Bass ၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်း
သူကအတုသေသောကြောင့်ဆူဒန်ရှိရေနံကုန်သွယ်မှုနှင့်ရှိတ်ရဲ့မြင်းအတုနှင့်အတူလုပ်ဖို့တစ်ခုခု၏သေဆုံးသွားပြီးနောက် Bart Bass full-on pantomime လူကြမ်းအဖြစ်ပြန်လာ၏။
သူသည်လေယာဉ်ပျက်ကျရာတွင်သူ၏သားကိုသတ်ရန်ကြိုးစားခဲ့သည်။ သူသည်ရွက်လှေတစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခုခုပေါ်တွင်ဘရုစ်ကက်ပလန်ဟုခေါ်သောလုပ်ကြံခံရသည်။ ဤသည်မှာ Bart 90 သည်သူ၏ကိုယ်ပိုင်ဟိုတယ်၏ခေါင်မိုးပေါ်မှသူသေဆုံးချိန်အထိပြိုလဲသွားသည့် '90s Disney Disney' ရုပ်ရှင်မှခိုးယူထားသောခေါင်မိုးပေါ်ရှိပြပွဲတစ်ခုဖြစ်သည်။
ပက်ထရစ် Bateman Jr.
ဒန် Humphrey ။ ဒန်။ Dan သည်အတင်းအဖျင်းမိန်းကလေးဖြစ်သည်။ Gostip Girl ဇာတ်ကားဟာရာသီဥတုကငါးနှစ်လုံးလုံးအသည်းအသန်ဆံပင်ဖြူသောဆံပင်ရွှေရောင် Kristen Bell ကထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပြီးတကယ်တော့ Dan Humphrey ပါ။ ဒန်ဟမ်ဖရီလုပ်ရပ်များသည် Gossip Girl post တိုင်း၌တုန်လှုပ်ချောက်ချားဖွယ်ရာဖြစ်သော်လည်းအခန်းတစ်ခန်းတွင်အခြားသူမရှိပါ။
ကိုယ့်မတော်တဆ instagram အပေါ်ဓာတ်ပုံတစ်ပုံကြိုက်နှစ်သက်လျှင်၎င်းနှင့်မတူလျှင်
ဟုတ်ပါတယ်၊ သူကဒန်ဟမ်ဖရေးပဲပြောတယ် ဤအ Hotty နှစ်ခုကထွက်အလုပ်လုပ်နိုင်ပါသလား? အတင်းမိန်းကလေးကောင်းတစ် ဦး ကြောင်ရန်ပွဲထက်ပိုနှစ်သက်ဘာမျှရှိပါတယ်။ ဒီဝေါဟာရကိုတီထွင်ခဲ့တဲ့ဒန်ဟမ်ဖရေးပဲပေါ့ Armani ထွန်းလင်းအတွက်သူမ၏နိုက်။ ဒန်ဟမ်ဖရီကကြေငြာခဲ့သည် - ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကပြိုလဲသွားသလိုပဲ - ၎င်းသည်ဒူးခြေအိတ်များဝတ်ထားသည်
Dan Humphrey ဟာဆယ်ကျော်သက်မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့အသွင်အပြင်မှာသူဂရုစိုက်သူတိုင်းကိုငါးနှစ်လောက်စိတ်သောကရောက်စေခဲ့ပြီးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရမတရားပြုခဲ့တာပါ။ အားလုံးဟာတိတ်တိတ်လေးသူ့ကိုယ်သူလို့သူ့ကိုပြောခဲ့ဖူးတဲ့အတန်းဖော်တစ်ယောက်ရဲ့ဘ ၀ ထဲကိုအင်အားသုံးဖြည့်တင်းဖို့ရေအေးမြတဲ့ရေရှည်အစီအစဉ်ပါ။
သို့သော်အနည်းဆုံးတော့ ဒါကြောင့် 90210 ကဲ့သို့မကောင်းတဲ့မဟုတ်ပါဘူး ။